Sokeyaasha Weld Flange Soosaarayaasha & Shirkadaha - Shiinaha Socket Weld Flange Factory
Ahama steel dunta la been abuurtay Flange
soo bandhigida alaabta ：
Flange ayaa sidoo kale loo yaqaan flange ama flange.Qeyb ka mid ah isku xira tuubo iyo tuubo, oo ku xiran dhamaadka tuubada.Waxaa jira godad ku yaal flange iyo booliyada ayaa isku dhejinaya labada flanges. injineernimada dhuumaha ayaa inta badan caan ah, flanges waxaa loo isticmaalaa labo labo. In injineernimada dhuumaha, flanges waxaa inta badan loo isticmaalaa isku xirka tuubooyinka.Ku rakib hal flange dhamaadka labadiisa tuubo. Tuubooyinka cadaadiska hooseeya waxaa lagu xiri karaa silig flange. Mashiinka alxanka waxaa loo isticmaalaa cadaadiska in ka badan 4kg. Dheji rooga u dhexeeya labada haad oo hoos u xir.
Flanges of cadaadiska kala duwan waxay leeyihiin dhumuc kala duwan waxayna isticmaalaan handarraabbado kala duwan.
Bambooyin iyo mashiinno, marka lagu xidho tuubada, qaybaha qalabkan ayaa sidoo kale laga sameeyaa qaabka u dhiganta flange, oo sidoo kale loo yaqaan isku xidhka flange.
Guud ahaan laba diyaaradood oo ku teedsan isticmaalka boolal iyo qaybaha isku xidhka ee xidhan, guud ahaan waxaa loo yaqaan "flange", sida isku xidhka biibiile hawo, qaybaha noocan ah waxaa loogu yeedhi karaa "qaybta flange".
Qaab dhismeedka isku xirka flange dunta ayaa ah isku imaatin, kaas oo ka kooban laba nooc oo kala firidhsan, dhawr boodh, lowska iyo goomayaal.
1/2 "- 30" dhaldhalaalka flange
Ahama Steel Weld Neck Flange
Heerka Macluumaadka Aasaasiga ah: DIN, GB, JIS, ANSI, GOST Nooca: Alxanka Flange Waxyaabaha: Qaabdhismeedka ahama ee birta: Xiriirka dambe: Xiriirinta Alxanka Alxanka: Wadada Waxsoosaarka RF: Cabbirka Beer: Sida Sawir Dheeraad ah Loogu Sameeyo Baako Info ah: xirmada dhoofinta ee caadiga ah: 100 Nooca Ton / Bisha: Mingda Gaadiidka: Badweynta, Dhulka, Goobta Cirka ee Asalka: Shahaadada Shiinaha: ISO9001 Port: Tianjin Product Description Waxaan & n ...
ASME B16.5 ahama Steel Weld Neck Flange
Heerka Macluumaadka Aasaasiga ah: DIN, GB, JIS, ANSI, GOST Nooca: Alxanka Flange Waxyaabaha: Qaabdhismeedka ahama ee birta: Xiriirka dambe: Xiriirinta Alxanka Alxanka: Wadada Waxsoosaarka RF: Cabbirka Beer: Sida Sawir Dheeraad ah Loogu Sameeyo Baako Info ah: xirmada dhoofinta ee caadiga ah: 100 Nooca Ton / Bisha: Mingda Gaadiidka: Badweynta, Dhulka, Goobta Cirka ee Asalka: Shahaadada Shiinaha: ISO9001 Port: Tianjin Product Description Weld ...
ANSI B16.6 ASME B16.47 Flange Weld Flange
Heerka Macluumaadka Aasaasiga ah: DIN, Nooca ANSI: Qalabka Alxanka Alxanka: Qaabdhismeedka Birta ahama: Xiriirka Dambe: Xiriirinta Alxanka Alxanka: Qaabka Waxsoosaarka RF: Cabbirka Cabbirka: 1/2 Inch - 60 Inch Baako Info Dheeraad ah: xirmada dhoofinta caadiga ah Wax soosaarka: 100 Ton / Magaca Bisha: Gaadiidka Mingda: Badweynta, Dhulka, Meesha Cirka ee Asal ahaan: Shahaadada Shiinaha: ISO9001 Port: Sifeynta Alaabada Tianjin Socket ...